सोलुमा व्यवस्थित भ्युटावर अभाव – आफ्नो समाचार
Afno News — १८ भाद्र २०७५, सोमबार १६:३६0comment
सोलुखुम्बु-पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बुमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने व्यवस्थित भ्यु टावरको अभाव खड्किएको छ । सिजनमा हजारौं पर्यटक आउने सोलुखुम्बुमा एउटै पनि व्यवस्थित भ्यु टावर नहुनुले पर्यटकहरुमा खिन्नता बोध उत्पन्न हुने गरेको छ ।
विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हेर्न आउने पर्यटकहरुले भ्यु टावरको अभाव भएको बताउने गरेका छन् । हाल जिल्लामा एउटैमात्र भ्यु टावर सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर ४ रातनाङ्गेमा रहे पनि उक्त टावर जिर्ण बनिसकेको छ ।
सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्गबु शेर्पाले व्यवस्थित भ्यु टावर निर्माणको योजना बनाइरहेको बताए । त्यस्तै लिखुपिके गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख बजेट भ्यु टावर निर्माणको लागी बिनियोजन गरेको छ ।
लिखुपिके गाउँपालिकाको पिके डाँडामा व्यवस्थित भ्यू टावर बनाउनको निम्ती बजेट बिनियोजन गरिएको हो । आगामी मंसिरबाट काम सुरु हुनेगरी योजना बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर बस्नेतको भनाइ छ ।
पिके डाँडाबाट नेपालमा अधिकांश हिमालका दृष्य देखिन सक्ने भएकाले पर्यटकहरुका लागि भ्यू टावर निर्माण गरिन लागिएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । हाल दैनिक रुपमा पर्यटकहरु पिके डाँडामा पुगेर हिमालका दृष्यावोकन गर्दै आएका छन् ।
यता नेचा सल्यान गाउँपालिकाले पनि चिसापानी डाँडा, फुर्के डाँडा र केशरी डाँडामा भ्युटावर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफ कुमार बास्तोलाले बताए । यी डाँडाहरुबाट पनि सगरमाथा लगायत हिमालका दृष्यहरु देख्न सकिने भएकाले भ्यु टावर निर्माण गरी पिकनिक स्पोटको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष बस्तोलाको भनाइ छ ।
उच्च तथा रमणिय स्थलहरुमा भ्युटावरको निर्माण गरे पर्यटकहरुको मोह बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । यस तर्फ जिम्मेवार व्यक्तिहरुको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
वि.सं. २०७५ साउन १९ गते शनिबार को राशिफल
शिक्षकको सरूवा खुल्यो
वि.सं. २०७५ पौष ०४ गते बुधबारको राशिफल